Ezi uche na ojiji nke ụgbọ ala-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Ezi uche na ojiji nke taya ụgbọ ala
Oge: 2020-12-29 Hits: 41
Safegbọ ala ahụ adịghị ize ndụ nkewapụ site na ọnọdụ taya siri ike.Noticed hụla mgbe koodu nchekwa okwu maka taya?Ugbu a, ka anyị kwuo maka iji taya ndị ahụ.
1. Lezienụ anya ka ị ga-eyi akara
Ihe mgbanye akara nke taya ahụ bụ 1.6mm, nke na-anọchite anya njedebe omimi nke ụdị usoro nzọ ụkwụ. Mgbe a na-eyi ụkpụrụ taya na elu dị nso na akara a, onye nwe ya ekwesịghị ịla azụ ịhapụ nke ochie ma nabata nke ọhụrụ.Ihe mgbanye akara nke taya ụgbọ ala izugbe bụ 1.6 mm, akara akara elu nke taya taya bụ 2.4 mm.
2. Taya nwere udiri ma obu blobs na mmebi ndi ozo
Ma nzọ ụkwụ ahụ gbawara agbaji, ụkwụ na-agba ọsọ, ọnwụ ọnwụ, ike taya dị njọ ma ọ bụ site na mba ọzọ, ekwesịrị ịlele ya ozugbo enwere ike wee dochie ya na oge, n'ihi na usoro ịkwọ ụgbọ ala kwa ụbọchị na-akpacharaghị anya, a ga-enwe ihe ize ndụ nke ịkụ.
3. Taya nwekwaa ndu ohuru
Ojiji nke taya ahụ na-abụkarị ihe dị ka afọ 5, karịa ọtụtụ afọ a, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na mmezi nkịtị, taya ahụ ga-apụta ka o sie ike, mgbe ahụ ọ ga-apụta mgbawa mbe.Taya ịka nká na-efunahụ ya, ọ bụ ezie na ha eyighị ka ha na-eyi akwa ma ọ bụ dọka akwa, ịga n'ihu na-eme nwere ike imebi nrụrụ, na-ebute ihe egwu.
Mgbe ị na-anya ụgbọ ala, ihe a na-apụghị ịkọwapụ iche bụ taya. M na-atụ aro na onye nwe ya kwesịrị ịlele taya mgbe ọ na-anya ụgbọ ala ma enweghi nrụgide ezughi ezu ma ọ bụ na e tinyere ntu, nke bụ ezigbo agwa dịka onye ọkwọ ụgbọ ala.
Previous: Usoro nyocha mmanụ ọkụ nyocha
Ọzọ: Ding ding dang! Ekeresimesi na-abịa